कस्तो चल्यो दया र दीयाको ‘मिस्टर झोले’ ? - nayakhoj24.com
कस्तो चल्यो दया र दीयाको ‘मिस्टर झोले’ ?
प्रकाशित मिती: January 14, 2018 | nayakhoj24 admin पढ्न:0मिनेट
शुक्रबारदेखि रिलिज भएको चलचित्र ‘मिस्टर झोले’ले सुखद ओपनिङ गरेको छ । काठमाण्डौ लगायत देशभर चिसो बढेसँगै हलमा दर्शकको संख्या निकै कमजोर थियो । करिब २ महिनादेखि हलमा दर्शकको संख्या कम भैरहेको थियो । शुक्रबारदेखि रिलिज भएको चलचित्र ‘मिस्टर झोले’ले २ दिनमा सुखद ओपनिङ गरेको छ ।
‘मिस्टर झोले’को ओपनिङलाई आक्रामक भन्न नमिलेपनि कमजोर पनि भन्न मिल्दैन । काठमाण्डौका वितरक गोविन्द शाहीका अनुसार चलचित्रले काठमाण्डौमा मात्र २ दिनमा ७० लाख माथिको ग्रस व्यापार गरेको छ । उनले चिसोमा यति दर्शक आउनुलाई सुखद भन्न सकिने बताए ।
नामको ब्रान्ड र मल्टिप्लेक्समा रुचाइएका कलाकारका कारण पनि यसले सुखद इनिसियल व्यापार गरेको हो । रामबाबु गुरुङ निर्देशित चलचित्रले मिश्रति प्रतिक्रिया पाएको छ । दयाहाङ राई, दीया पुन, बर्षा राउत, बिजय बराल लगायतका चलचित्रमा मुख्य भूमिका छ ।
आजबाट चलचित्रले गर्ने व्यापारले यसको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । टेकेन खड्का निर्माता रहेको चलचित्रका कार्यकारी निर्माता रौनक विक्रम कँडेल हुन् । अनलाइनखबर
Posted in फिल्मि खबर
विश्वकै कान्छा निर्देशकद्वारा निर्देशित ‘हैरान’को टिजर सार्वजनिक
चलचित्र ‘लिलीबिली’को पाँच दिनको व्यापार ४ करोड
सर्वाधिक ग्रस कलेक्सन गर्ने चौथो फिल्म बन्यो ‘शत्रुगते’
लिलिबिलीले तोड्यो रेकर्ड | अहिलेसम्म कमायो यति करोड (भिडियो)
शिल्पा र अनुपको ‘वीराङ्गना’ असार २९ मा प्रदर्शन हुने
बैशाख १४ गतेबाट प्रदर्शन हुने ‘ह्याप्पी डेज’ को ट्रेलर सार्वजनिक (भिडियो सहित)
प्रदूषण मुक्त नेपाल राष्ट्रिय एजेण्डा ः वनमन्त्री बस्नेत
विश्वकै ‘बदनाम’ सेलिब्रेटी यी हुन्, यस्ता छन् बदनामीका कारण
यी ५ प्रकारका पुरुषलाई घृणा गर्छन् महिला
युएईमा अझै १ सय ८५ जना नेपाली बन्धक जीवन विताउँदै
विश्वको सबैभन्दा लामो कार,जहाँ हेलिप्याडदेखि स्वीमिङ पुलसम्मका सुविधा
डेक्स :- मेनुका के सी
डेक्स :- रमेश पराजुली
संवाददाता (कतार) :- मनिक पौडेल
संवाददाता (मोरङ) :- रबिन्द्र बराल
संवाददाता (नवलपरासी) :- सहबान अन्सारी